Afaka manome lesona ho an’ireo ‘Ngeza’ miankin-doha amin’ny solika ve i Jordania mikasika ny angovo azo havaozina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Aogositra 2019 7:05 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, русский, Italiano, Español, عربي, Ελληνικά, English
Ny orinasa Shams Ma'an ao Jordania. Loharano: Shams Ma'an; Fampiasàna nahazoana alalana
Tombanana hitombo avo telo heny ny filàna herinaratra any Afovoany Atsinanana hatramin'ny taona 2050, manafaingana ny fanamaroana ny toekarena mihataka amin'ny solika ambanin'ny tany ka hitodika amin'ny angovo azo havaozina.
Nandinika ny tontolon'ny angovo erantany hatramin'ny taona 2050 ny orinasa Norveziana misahana ny fiantohana ny kalitao sy ny fitantanana an'ireo loza, DNV GL, ary maminavina fanovàna ifotony an'ireo toekarena, politika ary, vokatr'izay, ireo fampiasambola amin'ny resaka teknolojia ao Afovoany Atsinanana mba hamaliana ny filàna tsy mitsaha-mitombo.
Mohammed Alghoul, mpianatra iray manomana Ph.D. amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro ao amin'ny Anjerimanontolo King Fahd mikasika ny solika sy ireo mineraly ao Arabia Saodita, no nanambara tamin'ny Global Voices fa maherin'ny antsasaky ny vokatra rehetra amin'ny angovo ao amin'ny faritra no mety ho azo amin'ireo angovo azo havaozina hatramin'ny taona 2050:
Noho ny fihazakazaky ny fitombon'ny mponina, andrasana ny fitomboana malaky amin'ny filàna angovo any amin'ireo Emirà Arabo Mitambatra ao Afovoany Atsinanana. Ny fitomboana sy ny fihenan'ny vidin'ireo angovo azo havaozina dia hidika fa maherin'ny antsasaky ny famokarana angovo rehetra ao amin'ny faritra no ho avy amin'ireo angovo azo havaozina isankarazany hatramin'ny taona 2050.
Araka ny voalazan'ny Energy Transition Outlook 2018, tena misy dikany tanteraka ny tetezamitan'ireo fampiasambola ho any amin'ireo angovo azo havaozina ao amin'ny faritra – natosiky ny fitotongan'ny vidin'ireo teknolojia azo avy amin'ny masoandro sy ny rivotra, ary koa avy amin'ny habetsahan'ny masoandro sy ny rivotra ao amin'ny faritra. Manampy i Alghoul hoe:
“Hitombo ny tinady amin'ny herinaratra ho fampangatsiahana an'ireo tranobe sy fanalàna sira amin'ny rano, indrindra fa ny any amin'ny tanihay, ary ny rivotra sy ny masoandro dia mety ho afaka hanome angovo mora vidy… Ary mifanohitra amin'izany, tsy toy ireo solika fôsily (azo amin-javatra lo), tsy ho ritra mihitsy ny loharanon'ireny.”
Ary ireo firenena manankarena amin'ny solika sy entona fandrehitra, toa an'i Arabia Saodita ary ireo Emira Arabo Mitambatra, dia efa nanomboka nampiasa vola tamin'ireo angovo azo havaozina — indrindra fa ny angovo avy amin'ny masoandro.
Arabia Saodita, izay faharoa manana ny tahirin-tsolika goavana indrindra erantany, dia mampiasa vola hahazoana angovo 9,5 gigawatts azo amin'ny masoandro sy rivotra hatramin'ny taona 2023, araka ny voalazan'ny DNV GL. Hita ao anatin'ny Vina 2030 drafitra fampandrosoana an'i Arabia Saodita, ny fandraisana andraikitra vaovao hankamin'ireo angovo azo havaozina, izay ny 30%-n'ny herinaratra ao aminy dia avy amin'ireo angovo azo havaozina avokoa hatramin'ny taona 2030. Na izany aza, nitsongolohana tamin'ny antsipirihany sy niverenana nametraham-panontaniana ny vinan'ny fanjakana taorian'ny fahafatesan'ilay Saodiàna mpanao gazety Jamal Khashoggi tamin'ny Oktobra 2018…
Ny Emira Arabo Mitambatra, izay ahitana ny 8%-n'ireo tahirin-tsolika erantany, dia mampiasa vola betsaka ihany koa amin'ireo fotodrafitrasa ho an'ny angovo azo havaozina ary mikendry hahazo ny 50% amin'ny angovony avy amin'ireo angovo azo havaozina hatramin'ny taona 2050.
Mba hanamafisana ny fiarovana ara-angovo sy hamoronana asa, mamporisika an'ireo hafa ihany koa ao amin'ny faritra ireo ngeza roa mpamokatra solika mba hampiroborobo ny fotodrafitrasan'izy ireo famokarana angovo azo havaozina — voasonia tamin'ny taona 2017 ny fifanarahana diplomatika iray hitrandrahana ny tambajotra mampifandray ny famatsiana herinaratra manerana ny tontolo Arabo.
Ny tena marina, araka ireo fahitàn'ny Greentech Media (GTM), noho ny fanombohana ireo tetikasa vaovao marobe momba ny masoandro manerana ny faritra, nidina ho amin'ny fetra farany ambany ireo vidin-tsolika.
Ireo famintinana avy amin'ny tatitra iray an'ny Global Solar Market Attractiveness Index dia maminavina ihany koa fa i Arabia Saodita, ireo Emira Arabo Mitambatra, Bahrein, Oman ary Jordania dia hiaraka hanangana ny fotodrafitrasa mamokatra maherin'ny 22,4 gigawatts ato anatin'ireo taona efatra manaraka.
Saingy na eo aza ny fidinan'ny vidiny, maro amin'ireo ao amin'ny faritra no mbola miandry mba ho matotra ny tsenan'ny angovo azo avy amin'ny masoandro hoy i Abdullah Umer, talen'ny tetikasa ao King Abdullah City mikasika ny Angovo Atomika sy Azo Havaozina.
Ny fikorontanan'Ireo tsenan'ny angovo ao anatin'ny ankamaroan'ny faritra no mety ho antony lehibe indrindra amin'io. Hoy i Umer:
Tamin'ny haavo samy manana ny azy ary nandritra ny taona maro, nampiasa ny ambimbavany hanentsenana ny vidin'ny solika sy ny herinaratra eo amin'ny tsena anatiny ny ankamaroan'ireo firenena ao amin'ny faritra, tamin'ny nitanisàna ny lazain-dry zareo fa antony ho fandrisihana ny fampiasambola sy ireo fandraharahàna.
Ny tatitra iray an'ny Tahirimbola Iraisampirenena nandalinana tsena dimy tao Afovoany Atsinanana no nampiseho fa tamin'ny 2015, nanakaiky ny 150 lavitrisa dolara amerikàna ny fanohanana ara-bola ny solika — izay tafakatra manakaiky ny 72 isanjato no an'i Arabia Saodita.
Kajian'ny GTM Research fa ny salambidin'ny takelaka fandraisana ny taramasoandro dia mety ho afaka mifaninana amin'ny tambajotran'ny herinaratra raha tsy nampidinina tamin'ny fomba artifisialy ilay izy.
Saingy ampian'i Umer hoe ny fidinan'ny vidintsolika dia manentana ireo firenena mpamokatra solika ao amin'ny faritra mba hamerina hanombana ny ambimbavany — manokatra varavarana, araka izany, ho an'ireo mpamokatra takelaka fandraisana tara-masoandro.
Ary afaka mijery an'i Jordania ry zareo firenena manankarena solika ao amin'ny faritra raha resaka politika fampiroboroboana ny indostrian'ny masoandro, izay , araka ny GTM, miavaka ho iray amin'ireo hany firenena manana tsena mahasarika ny sehatra ara-barotra ho an'ny angovo azo amin'ny masoandro.
Tamin'ny 2012, nankatoavin'i Jordania ny Lalàna momba ny Angovo Azo Havaozina sy Fampiasàna Mahomby ny Angovo, ary milofo mavitrika mankany amin'ny angovo azo havaozina izy nanomboka teo. Ireo tetikasa momba ny angovo azo havaozina dia mety hahatonga an'i Jordania, firenena iray izay miankindoha tanteraka amin'ny fanafàrana solika, hahaleo tena kokoa amin'ny resaka angovo.
Ny orinasa Shams Ma’an, naorin'i First Solar, ilay orinasa amerikàna mpamokatra angovo azo amin'ny masoandro, dia nisokatra tamin'ny 2016 ary mamatsy tokantrano 35.000 any akaikin'i Petra, ary ny lapan'ny mpanjaka ihany koa dia foibe maka herinaratra amin'ny masoandro no mampihodina azy manontolo.
Araka ny lazain'i Alghoul:
Jordania, tsy toy ireo mpifanolo-bodirindrina aminy, dia manohana ny indostrian'ny angovo azo amin'y masoandro tsy mitsahatra mitombo ao aminy. Nialàny ny fanohanana ara-bola ny solika ary omeny tohana ara-panjakana ireo indostrian'ny angovo azo havaozina, amin'ny alàlan'ireo lalàna momba ny tetezamita ara-angovo.
Ny Tahirimbola nasionaly momba ny Angovo Azo Havaozina sy Fampiasàna Mahomby ny Angovo ao Jordania koa dia manome fandrisihana amin'ny endrika trosa sy araka ny rariny sy hitsiny ho an'ireo tetikasa madinika sy salasalany anatinà fiarahana mitan-tsoroka aminà banky enina ara-barotra. Hatramin'ny 2012, efa fampiasambola maherin'y 2,5 lavitrisa dolara amerikàna sahady no hita tao amin'ny firenena .
Hoy i Alghoul maminany:
Raha foanan'ireo firenena ny fanampian'izy ireo, ho afaka hifaninana eo amin'ny tsena malalaka ny angovo azo avy amin'ny masoandro ary azo antoka fa tena hilatsaka be ireo vidiny.